ပထမဦးဆုံးအ paparazzi ၏, ထိုစဉ်ဆက်မပြတ်စုဝေးရောက်ရှိနှင့်ဒုတိယအသည်လုံလောက်မှုမရှိနိုင်ငံသားများ၏ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အဖွဲ့အစည်း၏လုပျငနျးမှာသူတို့ရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်: နောက်ဆုံးအပတ်တွင်4နှစ်အရွယ်မင်းသားဂျော့ခ်ျလေ့ကျင့်သင်ကြားဘယ်မှာသောမတ်စ်ရဲ့ Battersea ကျောင်းမှာ, ဖြစ်ရပ်များအတွက်အလွန်ရတတ်၏။ ထုတ်ဝေ The Daily Mail ကအစီရင်ခံအဖြစ်, ကျောင်းများ၏မိဘများကြားတွင်သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား. ရက်အနည်းငယ်အကြာမင်းသားဂျော့ခ်ျ၏ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ကြိုးပမ်းမှုရှိ၏။ ရူးသွပ်မှုများစွာသိသာဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူအမြိုးသမီးတရဲဖြစ်ရတဲ့သောဆရာများဖြင့်အုတ်အုတ်သဲသဲသည်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျောင်းသားများ, သူမ၏ Manic စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ထူးဆန်းအမြင်များ, ကြီးမားတဲ့ကျောပိုးအိတ်နှင့်ရှည်လျားသောရင်ခွင်နောက်တော်သို့လိုက်!
စစ်ကြောရေးကာလအတွင်းကအမည်မသိနှစ် 40 ထဲကရှာတွေ့ခဲ့သည်, သူသည်ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုနှင့်အတူစွဲလမ်းသည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယခုအချိန်အထိကမိန်းမအမည်နှင့်မင်းသားဂျော့ခ်ျရဲ့သူမရဲ့အစီအစဉ်ကိုမသိရသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမူကားထိုသူငယ်တိုးမြှင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့ကဝိုင်းရံနေတဲ့ကျောင်းမှာပဲ! သောမတ်စ်ရဲ့ Battersea မိဘများစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားသည်အထိအဖြစ်အပျက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်မမေးမလျှောက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်နေသော်လည်းမင်းသားဂျော့ခ်ျ၏ဘဝနှင့်လေ့လာမှုများပေါ်မှာဤအဖြစ်အပျက်မျှသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ပညာနှင့်အမျိုးသားတို့နှင့်တစ်ဦးရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်၏ငယ်ရွယ်မင်းသားပထမဦးဆုံးသခင်။ ဝမ်းကွဲ Maud ဝင်ဆာ - အတွင်းသူသည်မိမိအတန်းဖော်တွေနဲ့အချိန်အများကြီးသုံးစွဲကြောင်းသတင်းပို့သည်။
ဝမ်းကွဲ Maude ဝင်ဆာ
ရမ်းဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့်အတူ four-ဆံပင်ရွှေရောင်အမျိုးသမီးဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက်ရဲ့ဝမ်းကွဲ၏မြေးဖြစ်၏။ မင်းသားဂျော့ခ်ျမိမိအဘ၏လက်, သခင်ဖရက်ဒရစ်ဝင်ဆာမှအစာရှောင်ကျင်းပအဖြစ်ကျောင်းကမိန်းကလေးလည်းအချို့သော trepidation တို့နှင့်အတူကြွနှင့်။
ဝမ်းကွဲ Maude ဝင်ဆာက c ဖခင်, သခင်ဖရက်ဒရစ်ဝင်ဆာ
"ဂျော့ခ်ျသည်ခက်ခဲကာလရှိလာပါတယ်။ သူမိဘများမေတ္တာရှင်မပါဘဲသူ့ကိုမှမသိရလူတို့နှင့်အတူထူးဆန်းတဲ့အရပျ၌တစ်ဦးတည်းဖြစ်ဖို့သင်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသူ့အဘို့လေးနှစ်ခက်ခဲတဲ့ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူကရငျ့၏ဤအဆင့်တဆင့်သွားပါနှင့်ဇာတ်ကောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရှိပါတယ်! "
လေလံ Sotheby ရဲ့အချိန်ကိုရောင်းကိတ်မော့စ်ကိုရွှေပန်းပု
ထိုနေ့၏ပုံရိပ်: အ Photocall "အားလပ်ရက်3ရက်နေ့တွင် Monsters 'မှာ Selena Gomez
ကလေးများ Alec Baldwin နှင့် Hilaria "သူဌေးက-sucker" ၏ Premiere မှာလူတိုင်းသဘောကျအောင်ဆက်ဆံ
အနက်ရောင်သားရေကုတ်အင်္ကျီနှင့်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းအတွက် Amal Clooney နယူးယောက်၏လမ်းများပေါ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး
Jenna Coleman: ဒါဟာတစ်ဦးမိဖုရားထက်အလားအလာမင်းသမီးလေးဖြစ်ပိုကောင်းပါ!
အစ်ကိုနစ်ကီမီ 12 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦး၏မုဒိမ်းပြုကျင့်ဘို့စမ်းသပ်ရပ်နေမည်
ကလေးတွေ 4-5 နှစ်ကနှင့်အတူခရစ္စမတ်လက်မှုပညာ
ဖက်ရှင်လက်ကိုင်အိတ် - Fall-ဆောင်းရာသီ 2015-2016
ဒါဝိဒ်သည် Duchovny Fame ၏ဟောလိဝုဒ်လမ်းလျှောက်အပေါ်တစ်ဦးကြယ်ပေါ်ထွန်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အူလမ်းကြောင်း dysbiosis ကုသမှု - ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
အီဗန်ပီတာ "အမေရိကန်ထိတ်လန့်ပုံပြင်" ၏ရာသီသစ်အတွက်လိင်တူချစ်သူများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်၏ပုံရိပ်ပေါ်ကြိုးစားနေသည်
တွမ် Hardy သူခိုး moped ဖမ်းမိ
အာလူးနဲ့ကောက်မုန့်ညက်နေဖန်ဆင်းတော်ကက် - စာရွက်
Chrissy Teigen တပါးအမျိုးသားနှင့်အတူတစ်ဦးကအခုန်အဘို့သူမ၏ခင်ပွန်းအပေါ်လက်စားချေတာ, သူ့နောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦးတက်တူးထိုးတယ်